Taunggyi - The Cherry Land: အကူအညီ
Windows Media Player Firefox Plugin - Download
အခုပေးထားတဲ့ plugin က windows XP sp2 အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်ကယ်လို့
Mozilla မသုံးပဲ IE ကိုသုံးတဲ့သူတွေကတော့ အနည်းဆုံး window media player 9
ကို install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် live ကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်လိုရပါတယ်။
window media player မရှိသေးသူတွေအတွက် download လုပ်နိုင်အောင်အောက်
မှာ link ပေးထားပါတယ။်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 11:47:00 PM
အညွှန်း: တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်, ကြေငြာချက်များ
Thanks for the plug ins. Thank you also for all the efforts that you and the entire team had put in for all of us to enjoy Tazaungdaing via live webcast.
Monday, November 19, 2007 10:29:00 AM
Saturday, January 09, 2016 12:40:00 PM
Saturday, March 26, 2016 8:59:00 AM
Saturday, June 25, 2016 6:06:00 AM
Saturday, November 19, 2016 4:16:00 PM
Saturday, March 04, 2017 2:35:00 PM
Monday, September 03, 2018 9:35:00 AM